Ogaden News Agency (ONA) – Shir Arima Badan oo Muhiim ah Lagaga Hadlay oo Wafdigii JOKA ay ku Qabteen Uitinhage
Shir Arima Badan oo Muhiim ah Lagaga Hadlay oo Wafdigii JOKA ay ku Qabteen Uitinhage
Shir heersare ah ayaa ka dhacay magaalada Uitenhage ee faraca jaaliyadda Ogadenya ee Koonfur Afrika oo qayb ka ahaa shirarkii ay sida joogtada ah u qabanyeen wufuudii ka socotay Xarunta Jaaliyadda Ogadenya ee Koonfur Afrija oo ku sugan magaalada Uitinhage.
Shirkan oo ay isgu yimaadeen xubnaha jaaliyadda ee faraca Eastern Cae ayaa bilowday salaadii duhurnimoka dib, waxaana daah-furkiisa lagu soo dhaweeyay Sh. Mxamad Raabi oo ah Hogaanka Dacwada, Arikmaha Diinta iyo Samafalka. Wuxuu sheekhu ka hadlay dhawrsanaanta iyo ku toosnaanta Diinta Islaamka inay tahay wadada ruuxu kaga badbaadi karo cadaabka. Muxaadarada ka dib ayay Kooxda Birjeex heesta Qaranka ka qaadeen shrka hortiisa.
Ka dib waxaa warbixin meela badan taabanaysa kasoo jeediyay Hogaanka Warfaafinta ee Jaaliyadda Ogadenya mudane Cabdiraxmaan Saciid suxuuna ka hadlay orshaha cadawgu doonayo inuu kula dagaalamo halganka dibadda ka socda kadib markii lagaga adkaaday dagaalada gudaha.
Warbixinta kadib waxaa masraxa kahadlay HogaankaAbaabulka ee jaaliyada S.Ogadenia mudane Yuusuf Islaam oo si aad u qiimi badan u diiri galiyay xubnaha jaaliyadda. Wuxuu Hogaanka ka warbixiyay waxqabadkii jaaliyadda Ogadenya ee Koonfur Afrika iyo sidii loogu midoobi lahaa in la dhamaystiro qoryaaasha ay jaaliyadda qorshaysatay.
Sidoo kale waxaa lagusoo dhaweeyay Abwaan Cabdinaasir Haybe oo gabay halgameed xikmad weyn xambaarsanayd kuna qotontay xaalada dhabta ah ee Ogadenya ka jirta. Gabaygan oo meela badan tilmaamay ayuu abwaanku si qiiro leh uga soo bandhigay madasha shirka.
Waxaa shirka sidoo kale ka dhex muuqday heeso halgameed ay kooxda Birjeex si shucuur leh oga qaadeen goobtii kulanka. Shirka ayaa lagu soo bandhigay afkaaro wax ku ool ah oo ay soo jeediyeen xubnaha jaaliyadda iyo hawl-wadeenada iyo kaadirka kasoo qayb galay shirka.
Ugu dambayntii shirku wuxuu kusoo dhamaaday jawi farxad leh sidii loogu talagalay.